Usesebenze eNyuvesi iminyaka engaphezu kwama-23, uthi wagqugquzelwa uSolwazi Malegapuru Makgoba oyiSekela-Shansela e-UKZN ukuba aqhubeke nezifundo zakhe. 'USolwazi Makgoba wangikhuthaza ukuba ngiqhubekele phambili ngesikhathi ekhuthaza abasebenzi ukuba baqhubeke nezifundo zabo okungenani bathole futhi baphothule iziqu zobudokotela, baphinde baqhubeke nokwenza ucwaningo,' kubeka okaMaphanga.
Inkuthazo nogqozi uyithole kakhulu kumfowabo ongasekho uMnu Bhekabantu Maphanga, uSolwazi Phyllis Zungu kanye noSolwazi Bonke Dumisa.
UMapanga ubonga uyanconcoza kakhulu ngokwesekwa akuthole e-UKZN. Lezi iziqu zami zesine kanye nama-Postgraduate Diploma amabili. I-UKZN idlale indima enkulu kakhulu, isibonelo nje, ukungikhokhela imali yezifundo kanye nokungivumela ukuba ngifunde ngesikhathi sokuhlolwa kanye nokwenza ucwaningo.
‘Ngizothanda ukubonga futhi uNkulunkulu ngomusa kanye nobubele bakhe abenzile kimina kuze kube imanje.’
OkaMapanga kumanje uphezu kwezifundo zakhe ze-MTech kwi-Security Management e-Unisa.